बलिउडको कला नेपाल भित्र्याउने गजुरेलको चाहना – Sulsule
सुलसुले २०७७ मंसीर २८ गते १३:४२ मा प्रकाशित
विश्व चलचित्र क्षेत्रमा कहलिएको मुम्बईमा रहेर लामो समय कला निर्देशन र प्रोडक्सन डिजाईनरमा जमेका नेपाली कलाकार अञ्जन गजुरेल बलिउडको कलालाई नेपाल भित्र्याउन चाहन्छन् ।
त्यसअघि काठमाडौँको भोटाहिटीमा रहेको ललितकला क्याम्पसमा चित्रकला विषयमा उनले प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेकाथिउ । सन् १९८८ मा धनुषाको लालगढमा जन्मेर स्थानीय विद्यालयमा एसएलसीसम्मको अध्ययन गरेका उनी काठमाडौँ हुँदै मुम्बईमा अध्ययनका लागि पुगेका हुन् ।
त्यहाँ अध्ययनपछि बालाजी फिल्मस्मा छिरेका उनले त्यसपछि चलचित्र क्षेत्रबाट बाहिर आउन परेन । चलचित्रका लागि सुटिङ गर्न आवश्यक सम्पूर्ण भौतिक संरचना निर्माण र निर्देशनको दायित्व उहाँले लिँदै आएका छन् । चलचित्रको कथालाई राम्रोसँग पर्दामा उतार्नका लागि तयार गरिने कलात्मक संरचना नै कला हो । जहाँ घरका भवनदेखि भित्री डिजाइनसम्म पर्दछन् ।
त्यसको निर्देशनको जिम्मेवारी कला निर्देशकको कामभित्र पर्दछ । गजुरेल कला निर्देशकसँगै प्रोडक्सन डिजाइनर पनि हुन् । ठूलो पर्दाको चलचित्र लुडो, काबुल एक्सप्रेस, क्यारिअन कुत्तो, वीलयु म्यारी मि, आगाया हिरो र रामभजन जिन्दावादको कला निर्देशन उनले गरेका छन् । भर्खरै रिलिज भएको अनुराग वासुको लुडो नेटफ्लिक्समा पनि हेर्न सकिने उनले जानकारी दिए । यसले आफ्नो कला निर्देशनलाई उचाइमा पु¥याएको गजुरेलको जिकिर छ ।
कुनै पनि चलचित्रको कथा तयार भएपछि सुटिङ (छायाङ्कन)का लागि आवश्यक संरचना थ्रिडिमा तयार भएसँगै सोही अनुसारको संरचनाको जिम्मेवारी गजुरेलले लिने गरेका छन् । उनले भने, “एउटा चलचित्रमा मेरो मातहतमा दुई सयदेखि तीन सय कर्मचारी मजदूर खट्ने गर्दछन् ।” बलिउडको एउटा चलचित्रले कला निर्देशन क्षेत्रमा मात्रै रु. ३० करोडदेखि ५० करोडसम्म खर्च गर्ने गरेको उनी बताउछन् ।
विगतलाई सम्झँदै उनले भने, “शुरुवाती क्षणमा मैले दैनिक दुई सय रुपैयाँमा पनि काम गरेँ, पछिल्लो समय एकै सातामा रु. आठ लाखसम्म आर्जन गर्न सफल भएको छु ।” आफू चलचित्र क्षेत्रमा छिर्दै गर्दा दैनिक आफूले रु. २०० पाउने र आफ्नो मातहतमा काम गर्नेले रु. दुई हजार २०० बुझ्दा नरमाइलो लाग्ने गरेको अनुभूति उनीसँग छ ।
मुम्बई शहरमा आफ्ना तीन वटा फल्याट भए पनि अबको आफ्नो जीवन नेपाली चलचित्रको विकासमा लगाउने गजुरेलको चाहना छ । नेपाली चलचित्र क्षेत्रले बलिउडको कला समेट्न सक्ने हो भने दर्शकको मन जित्न सहज हुने उनी बताउछन् ।
मुम्बईमा रहँदा कला निर्देशनसँगै गजुरेलले वास्तु शास्त्रको पनि अध्ययन गरेका छन् । कलाकै ज्ञानका कारण घर र कार्यालयको भित्री सजावट (इन्टेरियर डिजाइन) मा पनि उनको दख्खल रहेको राससले बताएको छ । विदेशमा सिकेका सीपसँगै नेपाल फर्कने चाहना रहेको उनले दोहो¥याए ।